विप्लब पुत्रको बाल्यकाल: बाबुराम पुत्री मानुषीले प्रकाश चन्दलाई ‘अक्सफोर्ड’ नदिएपछि (भिडियो)	Postpati – News For All
विप्लब पुत्रको बाल्यकाल: बाबुराम पुत्री मानुषीले प्रकाश चन्दलाई ‘अक्सफोर्ड’ नदिएपछि (भिडियो)
यस्तो थियो विप्लवका छोरा प्रकाश चन्दको बाल्यकाल
पोष्टपाटी २०७६ जेष्ठ २१,मंगलवार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
विप्लब पुत्र प्रकाश चन्दको बाल्यकाल
म सानै उमेर देखि घर छाडेर हिडेको थिए । त्यो उमेर देखि मैले संधै घाइतेहरुलाइ देखे, संधै भरि पिडामा भएका मान्छेहरु देखे । संधै भरि हामी बमबाड भित्र बस्यौं । संधै भरि युद्द्का रक्तामे कामरेडहरु देख्यौं, लासहरु आफै दफन गर्यौं ।
आफ्नै आँखा अगाडिका पीडाका घटनाहरु छन् । मैले ६ कक्षामा पढ्दा खेरि ग्रिनेट पड्केर संगैको साथि सहिद भए । साँझसंगै सुतेर बिहान स्कुल गई फर्किने बेला ग्रिनेट पड्केर धुकधुकीमा मात्रै भएर रगतले लत्पत्तिनु भएको थियो । सामान्य सीएमए पढ्नु भएको अङ्कलले एमस (सलाइन पानि) दिरह्नु भएको थियो । त्यतिखेर म चकित परेको थिए कि के यहि पानीले साथीलाई बचाउला त ? यसले सन्चो हुने भए किन बाँच्नु भएन ? भनेर अचम्म लाग्थ्यो ।
त्यसपछि खारा युद्द देखि रोल्पाको हाण्डिङ्ग सम्मका युद्दहरुमा घाइते भएका कामरेडहरुको अबस्था देखेर मलाइ यस्तो लाग्यो, सायद त्यो बेला सहि ढंगले कामरेडहरुले उपचार पाएको भए, उपचार ब्यबस्थापन गर्न सकेको भए, युद्दले आर्को उचाइ लिन्थ्यो होला । आज प्रचण्डहरुले यति छिट्टै सिध्याउन सक्दैनथे कि ? भन्ने लाग्छ ।
बाबुराम भट्टराईकि छोरी ‘मानुषि’ले अक्सफोर्ड डिक्सनरी माग्दा दिईनन
बाल्यकालमा म पढाईमा निकै कमोर थिए । फेल भाको केहो । फेल भएको केहो भन्ने मेसो पाउदैनथे । जब हामीले घर छोडेर हिडौ, इन्डियाबाट नेपाल आउदा दाङ र इन्डियाको सिमानामा पर्ने नाका चुरे एरियामा बुबा संग ३/४ महिना बसे । त्यतिखेर बुबाले मलाई ‘क’ बाट पढाउँ सुरु गर्नु भएको थियो । ककाकिकि र एबिसीडी पढाउनु भयो । त्यहाँ सुरक्षामा समस्या हुनेभए पछि घोराही हुँदै रोल्पा छिर्यौ । त्यतिबेला सम्म केहि अंग्रेजी मिनिङ्ग ‘आई, माई, मि’ वर्डहरु सिकेको थिए ।
त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईकि छोरी संग भेट भयो । उहाँले एउटा अक्सफोर्डको डिक्सनरी ल्याएर आउनु भएको रहेछ । त्यतिबेला मलाई अचम्म लाग्यो ! बुबाले मलाई कपिमा लेखेर सिकाउने कुराहरु त्यति ठुलो कितावमा हुँदो रहेछ । त्यो देखेर मैले उहाँलाई (मानुषी) मागे तर उहाँले दिनु भएन । त्यतिबेला सायद उहाँलाई चाहिने भएर होला ।
पछि मैले बुबालाई सुनाए । त्यस्पछी उहाँलाई एउटा किताब किन्दिनु पर्छ भन्ने लाग्यो होला । रोल्पाको टिला देखि नजिकै एउटा गाउ छ, द्वारे खोला भन्ने ! त्यहाँ गैसकेपछि बुबाले ‘चुडामणि गौतमको डिक्सनरी’ ल्याइदिनु भयो । अनि बुबाले मलाई भन्नु भएको थियो, ‘म दुइ तिन महिना पछि फर्किन्छु होला, सायद म केहि भएन भने, म आउछु । त्यतिखेर सम्म यो पढेर भ्याउनु, कण्ठ गर्नु, म आएर सोध्ने छु’ ।
त्यतिखेर मैले त्यो किताब पढेर पुरै कण्ठ गरे । मैले ५ कक्षमा पनि पढ्थे । बुबाले मलाई सोध्नु भयो, मैले सबै जाने । त्यसपछि म ५ कक्षामै फस्ट पनि भए । त्यतिखेर देखि हरेक साल फस्ट हुँदै आए । मैले रोल्पामै पढेको हुँ ।
त्यतिबेला देखिने मालेमाबाद सम्बन्धि अध्यन सुरु गरे, हतियार, सेना, फर्मेसन बिषयमा पनि पढ्न सुरुगरेको थिए ।
हामीले युद्द चाहेका छैनौ
हामीले युद्द चाहेका छैनौ तर सरकारले युद्दतिर धकेल्न खोजेको छ । केपी प्रचण्डले सोचेका होलान, ‘विप्लबसंग दुइचार वटा हतियार होलान, दुइचार जना सेनाहरु होलान र यिनीहरुलाई पेलेर छापामार युद्दमा धकेल्नु पर्छ र सिध्याउनु पर्छ तर त्यसप्रति हामी सचेत छौ ।’
युद्द गर्ने हाम्रो रहर र चाहाना होइन तर व्यवस्थाका बिरुद्द आर्को क्रान्तिको आबस्यकता छ । वर्गसंघर्षको अझै आबस्यकता छ ।
बार्ता बिरोधि होइनौ
अहिले सम्म हामी बार्तामा थियौ । आफ्नो पार्टी बार्ता बिरोधि पनि होइन, बरु राज्यले बार्ताको नाटक मन्चन गरिरहेको छ ! ‘बार्ता बिरोधि हामी हैनौ ! यदि बार्ता नै गर्ने हो भने निर्मलाको हत्याराको खुलस्त गरेर सुरुगरौ ।, मिचिएको सुस्ताको कुरा गरौ, स्वाश्थ्य शिक्षाको कुरा गरौ ! अहिलेकै समसायामयिक समस्याहरुमा बहस गरौ ।
बार्ताको ढ्वांग फुकेर हामीलाई दमन गर्न खोजिएको छ ! बार्ताको कुरा पनि गर्ने विप्लबलाई घुंडा भन्दा मुनिबाट पनि हान्न आदेश दिने, यसरि पनि बार्ता हुन्छ ?
एकीकृत क्रान्तिको लक्ष्य बैज्ञानिक समाजबादी ब्यबस्था हो । हाम्रा पार्टीका मागहरु जनताका जिबिकासंग जोडिएका बिषयहरु मात्रै रहेका छन् । जनयुद्दका घाइते र शहिदको ब्यबस्थापन हुनुपर्यो ! जनताको स्वाथ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो ।
मूल कुरा कुन उदेश्यका लागि जनयुद्द लडिएको थियो, किन लडिएको थियो ? तिनै उदेशहरु पुरा हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा हाम्रा मागहरु हुन् ।
६० लाखको बाइक चढेको भ्रममा नपर्न आग्रह
६० लाखको बाइक चढ्ने आरोप बारे फेसबुक चलाउनै भनेर जन्मिएकाहरुले काम नपाएर हुँदै नभएका बिषयहरु उठाएर सिध्यान खोज्ने मानिसहरुको खेल हो । जाउलाखेलमा पार्किङ्गमा राखेको बाइक थियो, त्यसमा चढेर फोटो खिचे तर दलालका मतियारले उचाल्ने काम गरे ।
यसमा कोहि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु ।’
बाबुराम पुत्री मानुषी
विप्लब पुत्र प्रकाश चन्द